Zvinyorwa zvaDavid Trice pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na David Trice
David Trice ndiye mubatanidzwa uye CEO we ENGAGE.cx, inotungamira ruzivo-inotungamirwa CRM yebhizinesi. Asati atanga ENGAGE.cx Trice aive VP weCRM kuOracle, kwaakatungamira kuvhurwa kweOracle's Fusion CRM.
B2C CRM yakakosha kune Vatengi Vanotarisana Nemabhizinesi
Chipiri, August 25, 2015 Chipiri, August 25, 2015 David Trice
Vatengi mumusika wanhasi vakapihwa simba kupfuura nakare kose, vachitsvaga mikana yekuita nemabhizinesi uye marangi. Iko kushanduka kwesimba kune vatengi kwakaitika nekukurumidza uye kwakasiya makambani mazhinji nhamo asina kushongedzerwa kusunga ese matsva ruzivo ruzivo vatengi vakatanga kupa nenzira nyowani. Kunyangwe ingangoita bhizinesi rese rakatarisana nevatengi rinoshandisa CRM mhinduro kugadzirisa vatengi uye tarisiro, mazhinji acho akavakirwa pamakumi emakore-ekare tekinoroji - uye iwo akagadzirwa